दिपाश्रीको केक काट्न को-को पुगे ? (फोटो फिचर) « Ramailo छ
दिपाश्रीको केक काट्न को-को पुगे ? (फोटो फिचर)
समय : 9:55 pm
निर्देशक दिपाश्री निरौलाले आफ्नो ४४ औं जन्मदिन आफ्नो टिम र मिडियासँग मनाएकी छिन् । नयाँ बानेश्वरस्थित रेडियो अडियोको कार्यालयमा नायिका प्रियंका कार्की दिपाको जन्मदिन मनाउँन केक लिएर पुगेकी थिइन् । भिडियो :
प्रियंका सहित कलाकारहरु शिवहरी पौडेल, केदार घिमिर माग्ने बुढा, जितु नेपाल मुन्द्रे लगायतले दिपाको प्रशंसा गर्दै जन्मदिनको शुभेच्छा दिए । दिपक भने छक्का पञ्जा ३ छायाँकनका लागि राजधानी बाहिर भएकाले दिपाको जन्मदिनमा आउन पाएनन् । दिपक र प्रियंकाले आफ्नो जन्मदिनमा लेखेको शब्दले मन छोएको भन्दै दीपा भावुक समेत भइन् ।
यस्तै उनले दशैंमा रिलिज हुने फिल्म छक्का पञ्जा ३ निकै मिहेनत गरेर बनाएको बताइन् । उनले फिल्मले दर्शकको मन जित्ने विश्वास दिलाइन् । ब्ल्कबस्टर फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजकी निर्देशक दिपाश्रीको जन्मदिनका केही तस्बिरहरु हेर्नुस् :